အာကာသနည်းပညာနဲ့ ခေတ်မှီပစ္စည်းကရိယာတွေမှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ မြေရှားသတ္တု အကြောင်း ဓါတ်သတ္တုရှာဖွေရေးနဲ့တူးဖေါ်ရေးဘူမိပညာရှင် ဦးစောနောင်ကို မေးမြန်းပြီး တင်ပြပေးမှာပါ။
‌မေး။ ။“ ဆရာဦးစောနောင် မြေရှားသတ္တု ဆိုတာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ တကယ်ပဲ ရှားလို့ မြေရှားလို့ ခေါ်တာပါလား ဆရာ။”
ဦးစောနောင်။. ။“မြေရှားက တကယ်တော့ ကမ္ဘာအပေါ် အခွံလွှာ ထဲမှာ မရှားပါဘူး။ ကမ္ဘာ့အပေါ် အခွံထဲမှာ တွေ့ရများဒြပ်စင်နဲ့ တွေ့ရနဲ ဒြပ်စင်ဆိုပြီး ၂ မျိုး ခွဲတဲ့အထဲမှာ ဒီမြေရှားက တွေ့ရများ ဒြပ်စင်ထဲမှာတောင် ပါနေသေးတယ်။ ဥပမာ တွေ့ရများ ဒြပ်စင် ၇၈ မျိုး ရှိတဲ့အထဲမှာ စီရီယမ် - Cerium မြေရှား တမျိုးက နံပါတ် ၂၅ ချိတ်တာပေါ့လေ။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီ စီရီယမ် ကို ကမ္ဘာ့နေရာ တော်တော်များများမှာ တွေ့နေရတာပါ။”
မေး။. ။ ဒါဆို ဘာကြောင့် မြေရှားလို့ ခေါ်တာပါလဲ ဆရာ။”
ဦးစောနောင်။. ။“ဘာလို့ ခေါ်လဲ ဆိုတော့ ၊ သူ့တခုထည်း သီးသန့်မတွေ့ပဲနဲ့. တခြား တွင်းထွက် တွေနဲ့တွဲတွေ့ရတယ်။ တွေ့ရတော့ သူ့ကို ခွဲထုတ်ဖို့ အတွက် ခွဲရတာ ခက်တာပေါ့။ ခွဲထုတ်ရတဲ့ စားရိတ်လည်း ကြီးမားတယ်။ ကြီးမားတော့ မြေရှား workable mine တခု မြေရှား ထုတ်လုပ်ဖို့ များပြားတဲ့ တန်ချိန်ရှိတဲ့ မိုင်း (သတ္တုတွင်း) တခု တွေ့ဖို့က ခဲယဉ်းတာပေါ့။ ဒါကြောင့်လည်း မြေရှား မိုင်းတွေက ကမ္ဘာပေါ်မှာ တခြား သတ္တုမိုင်းတွေနဲ့စာရင် တွေ့ရတာ နဲနေတာ ဖြစ်တယ်။ ၁၇၀၀ ကုန်ခါနီးတုန်းက မိုင်းသူဌေး တယောက်က အရင် မတွေ့ဘူးသေးတဲ့ သတ္တုပါတဲ့ ကျောက်တမျိုးကို တွေ့လိုက်တာ။ သူက ရှားတယ် ဆိုပြီးတော့ မြေရှားလို့ ပေးလိုက်တာ။ ဒီကနေပြီးတော့ စတင်ပြီး ခေါ်လိုက်ကြတာပဲ။”
မေး။. ။ “ဒီလို မြေရှားသတ္တုတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိပါသလား ဆရာ။ ဘယ်နေရာမှာ တွေ့ရပါသလဲ။”
ဦးစောနောင်။. ။“ဟုတ်ကဲ့ ရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ။ ဒီကချင်ပြည်နယ် ချီဘွေမြို့နယ်၊ ပန်ဝါဒေသမှာ ရှိတယ်။ အများကြီးပဲ ရှိတယ်။ အခုလည်း ထုတ်လုပ်နေတာပဲ။ ဘယ်လောက် အထိ များသလဲ ဆိုတော့။ ၂၀၂၀ မြေရှားထုတ်လုပ်တဲ့ တန်ချိန် အရ ဆိုရင် တရုတ်က ပထမပေါ့။ အမေရိကန်က ဒုတိယ။ ကျနော်တို့ မြန်မာက ပန်ဝါက တတိယ လိုက်ပါတယ်။ ဒါက သက်သေပြတာပဲလေ။ ကျနော်တို့ ဒီပန်ဝါ ဒေသမှာ မြေရှားဟာ မနည်းဘူး ဆိုတာ သက်သေပြတာပဲ။ တတိယတောင် ချိတ်တယ်ဆိုတော့။”
မေး။. ။ “ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ သတ္တုတူးဖေါ်ရေးမှာ ကြည့်ရင် ဒီမြေရှားသတ္တုကို အစိုးရက ဦးစီးပြီး တူးနေတာ မတွေ့ရပါဘူးဆရာ။ ဆိုတော့ ဒီမြေရှားသတ္တုကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ဘယ်နေရာတွေမှာ တူးနေပါလဲ”
ဦးစောနောင်။. ။“အဓိကကတော့ ဒီကချင်ပြည်နယ်မှာပဲ တူးကြတာပဲ။ ကချင်ပြည်နယ်မှာ အခုက ပန်ဝါ တူးတာပေါ့။ အစိုးရကတော့ တာဝန်ယူ တူးတယ်လို့ မကြားမိပါဘူး။”
မေး။. ။“ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ဒီမြေရှားသတ္တုဟာ ဘယ်လို ကျောက်တွေနဲ့ တွဲပြီးတော့ ဖြစ်လာတယ် ဆိုတာ ပြောပြပေးပါဆရာ။”
ဦးစောနောင်။. ။“ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဓိက တွေ့ရတဲ့ စီးပွါးဖြစ်ထုတ်လို့ရတဲ့ မြေရှား သတ္တုသိုက်တွေကို အဓိက ၄ မျိုးခွဲထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီ ၄ မျိုးကတော့ Cabonatite associated deposit - သိုက်ရယ်၊ Alkaline igneous associated deposit အယ်လ်ကာလီကြွယ် မီးသင့်ကျောက်နဲ့ တွဲတွေ့ရတဲ့သိုက်ရယ်၊ placer deposit ရယ် Residual deposit ဆိုပြီး ၄ မျိုးထဲမှာ အများဆုံး တွေ့ရတယ်။”
မေး။. ။“အဲဒီ ၄ မျိုးကို ရှင်းပြပေးပါဆရာ”
ဦးစောနောင်။. ။“ Cabonatite association deposit ကတော့ ကာဗွန်နတိုက် ကျောက်အမျိုးအစားနဲ့ တွဲပြီး ဖြစ်လာတဲ့ သတ္တုသိုက်မျိုးပေါ့။ ဒုတိယ က အယ်လ်ကာလီဓါတ် ကြွယ်ဝတဲ့ မီးသင့်ကျောက်တွေနဲ့ တွဲဖက်ပြီး ဖြစ်လာတဲ့ သတ္တုသိုက်မျိုး၊ အထူးသဖြင့် Nepheline Syenite ကျောက်မျိုးရယ်၊ Alkaline Granite- အယ်ကာလီကြွယ် ဂရင်းနစ်ကျောက်ရယ်၊ Pegmatite ပက်ဂမာတိုက် ကျောက်မျိုးရယ် ထဲမှာ အများဆုံး တွဲတွေ့ရတယ်။ အနည်ကျပြီး ဖြစ်လာတဲ့ Placer သိုက်မှာတော့ သူက ၂ မျိုးထပ်ပြီး ခွဲထားတယ်။ မရိန်း ပလေစာ (Marine placer) ရယ် အလူဗီရယ် ပလေစာ (Alluvial placer) ရယ်၊ Placer deposit ကတော့ ဘာသာပြန်ရင်တော့ ရေဆောင်သိုက်ပေါ့။ နောက်တခါ Residual ကတော့ ကြွင်းစုသိုက်။ ဒီ residual ကလည်း ၂ မျိုးခွဲထားတယ်။ Lateritic သိုက်နဲ့. clay သိုက် လို့ ခွဲထားတယ်။ အဲဒီ ၄ မျိုးထဲမှာ စီးပွါးဖြစ် ထုတ်နေတဲ့ မိုင်းတွေက အများဆုံးက ဒီ ၄ မျိုးထဲမှာ တွေ့ရတာ များတယ်။”
မေး။. ။“ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တွေ့ရတဲ့ အမျိုးအစားက ဘာပါလဲဆရာ။”
ဦးစောနောင်။. ။“မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီပန်ဝါမှာ တွေ့တာကတော့ ဒီ အယ်လ်ကာလီကြွယ် ဂရင်းနစ် ကျောက်မျိုးထဲမှာ တွေ့နေရတာပဲ။ အယ်လ်ကာလီဓါတ် ကြွယ်ဝတဲ့ မီးသင့်ကျောက်တမျိုးနဲ့ တွဲဖက်ပြီးတော့ တွေ့ရတယ်။ ဒါကတော့ Primary ပေါ့။ ပင်ရင်းသိုက်။ အယ်လ်ကာလီကြွယ်တဲ့ မီးသင့်ကျောက်နဲ့ တွဲပြီး တွေ့ရတဲ့ မီးသင့်ကျောက် ကတော့ ဟိုးမြေအောက်မှာ၊ သူကတော့ ပင်ရင်းသိုက်ပေါ့။ သူ့အပေါ်မှာ ဥတုရာသီတိုက်စားမှု weathering ကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ ဂရင်းနစ်ကျောက် ကနေပြောင်းလာတဲ့ Laterite လက်ထရွိုက်တို့ အယ်လ်ကာလီကြွယ်တယ်ဆို clay တို့ ဖြစ်လာတယ်။ ဂရင်းနိုက် Granite ကျောက်မှာ သံဓါတ် ကြွယ်ရင်တော့ Laterite ဖြစ်လာတယ်။”
မေး။. ။“ဂဝံကျောက်ပေါ့နော် ဆရာ။”
ဦးစောနောင်။. ။“ဟုတ်တယ်။ Laterite က ဂဝံကျောက်။ Clay ကတော့ မြေစေး၊ မြေစေး အမျိုးအစား သိုက်နဲ့တွဲတွေ့ရတယ်။”
ဘူမိပညာရှင် ဦးစောနောင်က ပြောပြခဲ့တာပါ။
ပထမဆုံး မြေရှားသတ္တု အဖြစ် အနက်ရောင် ထူးခြားတဲ့ တွင်းထွက်တမျိုး (အီတာဘိုက် Ytterbite) ကို ၁၇၈၇ ခုနှစ်က ဆွီဒင်စစ်တပ်က အပျော်တမ်း ဘူမိ ဓါတုပညာရှင် ဗိုလ်ကြီး ကားလ် အက်ဆယ်လ် အာရ်ရေးနီးယပ်စ် Cark Axel Arrhenius က ဆွီဒင်နိုင်ငံ စတော့ဟုမ်မြို့အနီး အီတာဘီ (Ytterby) မြို့လေးနားက ကျောက်မိုင်းငယ်တခုမှာ တွေ့ခဲ့တာပါ။
မြေရှားသတ္တုကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ တူးဖေါ်နေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆက်တင်ပြပေးအုံးမှာပါ။
အာကာသနညျးပညာနဲ့ ခတျေမှီပစ်စညျးကရိယာတှမှော မရှိမဖွဈလိုအပျတဲ့ မွရှေားသတ်တု အကွောငျး ဓါတျသတ်တုရှာဖှရေေးနဲ့တူးဖျေါရေးဘူမိပညာရှငျ ဦးစောနောငျကို မေးမွနျးပွီး တငျပွပေးမှာပါ။
‌မေး။ ။“ ဆရာဦးစောနောငျ မွရှေားသတ်တု ဆိုတာ ကမ်ဘာပျေါမှာ တကယျပဲ ရှားလို့ မွရှေားလို့ ချေါတာပါလား ဆရာ။”
ဦးစောနောငျ။. ။“မွရှေားက တကယျတော့ ကမ်ဘာအပျေါ အခှံလှာ ထဲမှာ မရှားပါဘူး။ ကမ်ဘာ့အပျေါ အခှံထဲမှာ တှရေ့မြားဒွပျစငျနဲ့ တှရေ့နဲ ဒွပျစငျဆိုပွီး ၂ မြိုး ခှဲတဲ့အထဲမှာ ဒီမွရှေားက တှရေ့မြား ဒွပျစငျထဲမှာတောငျ ပါနသေေးတယျ။ ဥပမာ တှရေ့မြား ဒွပျစငျ ၇၈ မြိုး ရှိတဲ့အထဲမှာ စီရီယမျ - Cerium မွရှေား တမြိုးက နံပါတျ ၂၅ ခြိတျတာပေါ့လေ။ ဒါကွောငျ့လညျး ဒီ စီရီယမျ ကို ကမ်ဘာ့နရော တျောတျောမြားမြားမှာ တှနေ့ရေတာပါ။”
မေး။. ။ ဒါဆို ဘာကွောငျ့ မွရှေားလို့ ချေါတာပါလဲ ဆရာ။”
ဦးစောနောငျ။. ။“ဘာလို့ ချေါလဲ ဆိုတော့ ၊ သူ့တခုထညျး သီးသနျ့မတှပေဲ့နဲ့. တခွား တှငျးထှကျ တှနေဲ့တှဲတှရေ့တယျ။ တှရေ့တော့ သူ့ကို ခှဲထုတျဖို့ အတှကျ ခှဲရတာ ခကျတာပေါ့။ ခှဲထုတျရတဲ့ စားရိတျလညျး ကွီးမားတယျ။ ကွီးမားတော့ မွရှေား workable mine တခု မွရှေား ထုတျလုပျဖို့ မြားပွားတဲ့ တနျခြိနျရှိတဲ့ မိုငျး (သတ်တုတှငျး) တခု တှဖေို့က ခဲယဉျးတာပေါ့။ ဒါကွောငျ့လညျး မွရှေား မိုငျးတှကေ ကမ်ဘာပျေါမှာ တခွား သတ်တုမိုငျးတှနေဲ့စာရငျ တှရေ့တာ နဲနတော ဖွဈတယျ။ ၁၇၀၀ ကုနျခါနီးတုနျးက မိုငျးသူဌေး တယောကျက အရငျ မတှဘေူ့းသေးတဲ့ သတ်တုပါတဲ့ ကြောကျတမြိုးကို တှလေို့ကျတာ။ သူက ရှားတယျ ဆိုပွီးတော့ မွရှေားလို့ ပေးလိုကျတာ။ ဒီကနပွေီးတော့ စတငျပွီး ချေါလိုကျကွတာပဲ။”
မေး။. ။ “ဒီလို မွရှေားသတ်တုတှေ မွနျမာနိုငျငံမှာ ရှိပါသလား ဆရာ။ ဘယျနရောမှာ တှရေ့ပါသလဲ။”
ဦးစောနောငျ။. ။“ဟုတျကဲ့ ရှိပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာ။ ဒီကခငျြပွညျနယျ ခြီဘှမွေို့နယျ၊ ပနျဝါဒသေမှာ ရှိတယျ။ အမြားကွီးပဲ ရှိတယျ။ အခုလညျး ထုတျလုပျနတောပဲ။ ဘယျလောကျ အထိ မြားသလဲ ဆိုတော့။ ၂၀၂၀ မွရှေားထုတျလုပျတဲ့ တနျခြိနျ အရ ဆိုရငျ တရုတျက ပထမပေါ့။ အမရေိကနျက ဒုတိယ။ ကနြျောတို့ မွနျမာက ပနျဝါက တတိယ လိုကျပါတယျ။ ဒါက သကျသပွေတာပဲလေ။ ကနြျောတို့ ဒီပနျဝါ ဒသေမှာ မွရှေားဟာ မနညျးဘူး ဆိုတာ သကျသပွေတာပဲ။ တတိယတောငျ ခြိတျတယျဆိုတော့။”
မေး။. ။ “ဒါပမေယျ့ မွနျမာနိုငျငံမှာ သတ်တုတူးဖျေါရေးမှာ ကွညျ့ရငျ ဒီမွရှေားသတ်တုကို အစိုးရက ဦးစီးပွီး တူးနတော မတှရေ့ပါဘူးဆရာ။ ဆိုတော့ ဒီမွရှေားသတ်တုကို မွနျမာနိုငျငံမှာ ဘယျလိုပုံစံနဲ့ ဘယျနရောတှမှော တူးနပေါလဲ”
ဦးစောနောငျ။. ။“အဓိကကတော့ ဒီကခငျြပွညျနယျမှာပဲ တူးကွတာပဲ။ ကခငျြပွညျနယျမှာ အခုက ပနျဝါ တူးတာပေါ့။ အစိုးရကတော့ တာဝနျယူ တူးတယျလို့ မကွားမိပါဘူး။”
မေး။. ။“ဟုတျကဲ့ပါ။ ဒီမွရှေားသတ်တုဟာ ဘယျလို ကြောကျတှနေဲ့ တှဲပွီးတော့ ဖွဈလာတယျ ဆိုတာ ပွောပွပေးပါဆရာ။”
ဦးစောနောငျ။. ။“ကမ်ဘာပျေါမှာ အဓိက တှရေ့တဲ့ စီးပှါးဖွဈထုတျလို့ရတဲ့ မွရှေား သတ်တုသိုကျတှကေို အဓိက ၄ မြိုးခှဲထားတာ တှရေ့ပါတယျ။ ဒီ ၄ မြိုးကတော့ Cabonatite associated deposit - သိုကျရယျ၊ Alkaline igneous associated deposit အယျလျကာလီကွှယျ မီးသငျ့ကြောကျနဲ့ တှဲတှရေ့တဲ့သိုကျရယျ၊ placer deposit ရယျ Residual deposit ဆိုပွီး ၄ မြိုးထဲမှာ အမြားဆုံး တှရေ့တယျ။”
မေး။. ။“အဲဒီ ၄ မြိုးကို ရှငျးပွပေးပါဆရာ”
ဦးစောနောငျ။. ။“ Cabonatite association deposit ကတော့ ကာဗှနျနတိုကျ ကြောကျအမြိုးအစားနဲ့ တှဲပွီး ဖွဈလာတဲ့ သတ်တုသိုကျမြိုးပေါ့။ ဒုတိယ က အယျလျကာလီဓါတျ ကွှယျဝတဲ့ မီးသငျ့ကြောကျတှနေဲ့ တှဲဖကျပွီး ဖွဈလာတဲ့ သတ်တုသိုကျမြိုး၊ အထူးသဖွငျ့ Nepheline Syenite ကြောကျမြိုးရယျ၊ Alkaline Granite- အယျကာလီကွှယျ ဂရငျးနဈကြောကျရယျ၊ Pegmatite ပကျဂမာတိုကျ ကြောကျမြိုးရယျ ထဲမှာ အမြားဆုံး တှဲတှရေ့တယျ။ အနညျကပြွီး ဖွဈလာတဲ့ Placer သိုကျမှာတော့ သူက ၂ မြိုးထပျပွီး ခှဲထားတယျ။ မရိနျး ပလစော (Marine placer) ရယျ အလူဗီရယျ ပလစော (Alluvial placer) ရယျ၊ Placer deposit ကတော့ ဘာသာပွနျရငျတော့ ရဆေောငျသိုကျပေါ့။ နောကျတခါ Residual ကတော့ ကွှငျးစုသိုကျ။ ဒီ residual ကလညျး ၂ မြိုးခှဲထားတယျ။ Lateritic သိုကျနဲ့. clay သိုကျ လို့ ခှဲထားတယျ။ အဲဒီ ၄ မြိုးထဲမှာ စီးပှါးဖွဈ ထုတျနတေဲ့ မိုငျးတှကေ အမြားဆုံးက ဒီ ၄ မြိုးထဲမှာ တှရေ့တာ မြားတယျ။”
မေး။. ။“ဟုတျကဲ့ပါ ဆရာ။ မွနျမာနိုငျငံမှာ တှရေ့တဲ့ အမြိုးအစားက ဘာပါလဲဆရာ။”
ဦးစောနောငျ။. ။“မွနျမာနိုငျငံမှာ ဒီပနျဝါမှာ တှတေ့ာကတော့ ဒီ အယျလျကာလီကွှယျ ဂရငျးနဈ ကြောကျမြိုးထဲမှာ တှနေ့ရေတာပဲ။ အယျလျကာလီဓါတျ ကွှယျဝတဲ့ မီးသငျ့ကြောကျတမြိုးနဲ့ တှဲဖကျပွီးတော့ တှရေ့တယျ။ ဒါကတော့ Primary ပေါ့။ ပငျရငျးသိုကျ။ အယျလျကာလီကွှယျတဲ့ မီးသငျ့ကြောကျနဲ့ တှဲပွီး တှရေ့တဲ့ မီးသငျ့ကြောကျ ကတော့ ဟိုးမွအေောကျမှာ၊ သူကတော့ ပငျရငျးသိုကျပေါ့။ သူ့အပျေါမှာ ဥတုရာသီတိုကျစားမှု weathering ကွောငျ့ ဖွဈလာတဲ့ ဂရငျးနဈကြောကျ ကနပွေောငျးလာတဲ့ Laterite လကျထရှိုကျတို့ အယျလျကာလီကွှယျတယျဆို clay တို့ ဖွဈလာတယျ။ ဂရငျးနိုကျ Granite ကြောကျမှာ သံဓါတျ ကွှယျရငျတော့ Laterite ဖွဈလာတယျ။”
မေး။. ။“ဂဝံကြောကျပေါ့နျော ဆရာ။”
ဦးစောနောငျ။. ။“ဟုတျတယျ။ Laterite က ဂဝံကြောကျ။ Clay ကတော့ မွစေေး၊ မွစေေး အမြိုးအစား သိုကျနဲ့တှဲတှရေ့တယျ။”
ဘူမိပညာရှငျ ဦးစောနောငျက ပွောပွခဲ့တာပါ။
ပထမဆုံး မွရှေားသတ်တု အဖွဈ အနကျရောငျ ထူးခွားတဲ့ တှငျးထှကျတမြိုး (အီတာဘိုကျ Ytterbite) ကို ၁၇၈၇ ခုနှဈက ဆှီဒငျစဈတပျက အပြျောတမျး ဘူမိ ဓါတုပညာရှငျ ဗိုလျကွီး ကားလျ အကျဆယျလျ အာရျရေးနီးယပျဈ Cark Axel Arrhenius က ဆှီဒငျနိုငျငံ စတော့ဟုမျမွို့အနီး အီတာဘီ (Ytterby) မွို့လေးနားက ကြောကျမိုငျးငယျတခုမှာ တှခေဲ့တာပါ။
မွရှေားသတ်တုကို မွနျမာနိုငျငံမှာ တူးဖျေါနတောနဲ့ ပတျသကျပွီး ဆကျတငျပွပေးအုံးမှာပါ။